India ndiyo nyika ine mimwe nyika isinganzwisisiki - kubva kune yakajeka, yakajeka, uye yakavhenekera kune zvakashata zvakazara, iyo chete inogara ichigara ichidziya yevanhu. Zvakanaka, uye chikafu.
India ndiyo nyika ye2nd yevanhu vakawanda munyika yose, uye sezvinoitika kune chero nzvimbo ipi neinopfuura a bhiriyoni vanhu, pachava nenguva dzinotyisa kune chero munhu anofamba. Asi, rega kukanganisa - hapana chaipo kunze kweIndia.
The Golden Temple yeAmritsar
Language: Pane 23 mitauro yepamutemo muIndia, zvose isungano kune kusiyana nekudzika kwevanhu. Vakawanda vevanhu vanotaura mitauro yakawanda, kusanganisira yepamusoro ye125 mamiriyoni eEnglish vatauri uye 75 mamiriyoni eFrench anotaura.
Mari: Rupee rweIndia (INR). Iye zvino, Ruppe iri pa 64 kusvika ku1 USD.
Power Adapter: MuIndia mabheti ezvigadziro ndeyechimiro C, D uye M. Mhepo yakakwana ndeye 230 V uye inowanzo yakawanda ndeye 50 Hz